FBA Kunze kwenyika Warehousing Kutamisirwa - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Iye zvino mazhinji eUnited States imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa ichapa kuendesa kuAmazon mhiri kwemakungwa imba yekuchengetera. Zvichienzaniswa nekufambisa kwakananga kuimba yekuAmazon yekune dzimwe nyika muUnited States, kutapurirana kunogona kubatsira vatengesi kuchengetedza zvimwe zvekufambisa, kugadzirisa mashandiro ekugadzirisa, uye kugadzirisa kukurumidza kwekutengeswa kwechigadzirwa. , zvinotevera zvichaunzwa kwauri.
Maitiro ekuchinjisa kuAmazon Overseas Warehouse muUS:
Kutanga, mutengesi anofanirwa kutumira zvinhu kubva munyika kuenda kunzvimbo yakatarwa yekuchengetera yeUS mhiri kwemakungwa. Dzimwe dzimba dzekumhiri kwemakungwa muUnited States dzinopa masevhisi anoenderana, kuitira kuti mutengesi asafane nekambani yezvigadzirwa. Mushure mekutambira zvinhu kubva kumutengesi, imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa inozoburitsa, kuverenga, kurekodha nekuzviisa pamasherufu, uyezve inoenderana neruzivo rwezvigadzirwa zvigadzirwa kumutengesi. Kana Amazon Overseas Warehouse ichida kuzadzikiswa, mutengesi anozivisa Overseas Warehouse, uye zvadaro zvinhu zvozoiswa mumapepa, zvakanyorwa uye zvotumirwa kunzvimbo yakasarudzwa yeAmazon yekuchengetedza zvinoenderana nezvinodiwa nemutengesi.
Ndezvipi zviripo mutengo wekuchinjisa kuAmazon Overseas Warehouse?
1. Musoro wekutakura zvinhu: Mutengo wekuti mutengesi aendese zvinhu kuUnited States kuburikidza nekambani yezvigadzirwa. Mutengo wekutakura wakasiyana neuyo wekutakura nendege. Kazhinji, mutengo wekutakura kwegungwa wakadzikira.
2. Management muripo: Inonyanya kureva kumwe manejimendi mari yezvinhu mudura remhiri kwemakungwa muUnited States, senge hesera, masherufu, yekuisa system, nezvimwe, uye kuchave nemanejimendi manejimendi yezvinhu kunze kwedura.
3. Mari yekuchengetedza: imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa inobhadharisa mutengesi imwe mari yekuchengetedza mwedzi wega wega. Kazhinji, mutengo unoverengwa zvinoenderana nenzvimbo uye huremu hwezvinhu. Iyo chaiyo yekuchaja mwero inofanirwa kubvunzurudzwa kune mhiri kwemakungwa imba yekuchengetera.
4. Mari yekuendesa: kana mutengi achiraira, imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa inoronga kuendesa chigadzirwa uye kutakura, kuburikidza nechikwata chavo kana nekambani yezvigadzirwa zvemuno zvekutakura, mutengesi anodikanwa kubhadhara imwe mari yekuendesa.
Parizvino, matura mazhinji emhiri kwemakungwa muUnited States achapa basa rekuchinjisa kumatura ekumahombekombe eAmazon. Isu tichanyanya kutarisa kana zvakakodzera kuti vashandisi vaendese sevhisi zvinoenderana neyedu chaiyo mamiriro. Nekuti iko kuendesa kuchaburitsa imwe sevhisi yebhadharo, asi zvakare inogona kuburitsa kusarudzika kumashure uye mamwe mamiriro; Asi zvakare zvinoenderana neyekunze kwenyika yekuchengetera sevhisi, mutengo uye zvimwe zvinhu kusarudza yakakodzera mhiri kwemba yekuchengetera.
Kana iwe uine chero chaunofarira, pls hapana hestate yekundibata neni pafoni yangu: +86 17322126273.